Ururka YUSOM oo hawlo nadaafadeed ka bilaabay xaafada Islii+Sawiro – SBC
Ururka YUSOM oo hawlo nadaafadeed ka bilaabay xaafada Islii+Sawiro
Posted by Webmaster on January 29, 2012 Comments
Ururka YUSOM oo ah urur ka dhisan xaafada Islii ee magaaladan Nairobi ayaa maanta hawlgal lixaad leh oo ku aadan dhanka nadaafada waxay ka bilaabeen isla xaafada gudeheeda iyo daafaheeda .
Hawlgalkan oo ah mid balaaran ayaa waxaa fulinaya ururka YUSOM waxana furitaankii ka soo qayb galay hawshan Yusuf Hassan oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxana xildhibaanku uu aad ugu mahad celiyay ururka YUSOM oo uu sheegay in ay hawl aad u wanaagsan ay ka fuliyeen xaafada Islii waxana uu sheegay in talaabadan ay tahay mid kudayasha mudan loona baahan yahay in ururkan lagu daydo .
Xildhibaan Yusuf Hassan ayaa sidoo kale ka hadlay waxqabadkooda ku aadan dhanka bilicda Islii waxana uu sheegay in ay wax wayn ka qabteen xaafada oo ay ugu horeyso dhanka bilicda iyo hagaajinta wadooyinka oo ay hada ka socoto shaqo lixaadleh .
Intaas kadib waxaa isna goobta ka hadlay Farxaan Maxe’d Hashi oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan YUSOM waxana uu farxaan ku dheeraaday ka hadalka waxyaabaha ku dhaliyay in ay hawlgalkan nadaafada la xiriira ay ka fuliyaan xaafada Islii waxana uu sheegay in bilicda xaafadu ay tahay mid si aad ah u liidata loona baahanyahay in wax wayn laga qabto .
Farxaan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in hawlgalkan nadaafad ay iskood uga fulinayaan xaafada iyadoo aanay jirin cid gacan ku siinaysa hawshan ay maanta bilaabeen qabashadeeda, waxana uu carabka ku adkeeyay in ka urur ahaan ay hawlgalkan wadayaan ilaa inta ay bilicda magaalada ay noqonayso mid hagaagsan .
Hawlgalkan nadaafadeed ayaa maanta laga dareemayay guud ahaan xaafada Islii iyo nawaaxigeeda iyadoo wadda kasta aad ku arkaysay dhalinyaro ku labisan fanaanado ay gadaal kaga qorantahay magaca YUSOM waxana maanta hawlaha nadaafadeed ay ku soo dhamaadeen hab aad u wanaagsan iyadoo aysan hawshan ku ekaan doonin maanta oo kali ah .
Ururka YUSOM oo ah ururda lixaadka leh ee ka dhisan Islii ayaa la asaasay sanadii 2008 waxana mudadii uu jiray ururkan uu wax wayn ka qabteen gudaha xaafada Islii waxana wali ay masuuliyiinta ururku ay sheegeen in hawlohoodu ay yihiin kuwo ay sii wadayaan .
abshir ciise cabdi says:
asc dhamaan umada islaamka waan salamayaa salaan ka dib waxaan gaar u salamayaa umada somaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay ilahay baa mahad iska leh aniga oo ah dhalin yarada islii ku nool magalada nairobi ee dalka kenya aad iyo aad ayaan ugu farxay howsha ay ururka yusom uu ka wado magalada xafada islii ee ku adan nadafada